प्याज निर्यातमा भारतले लगायो प्रतिबन्ध ! « MNTVONLINE.COM
प्याज निर्यातमा भारतले लगायो प्रतिबन्ध !
काठमाडौँ । भारत सरकारले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पाउडरबाहेक ताजा प्याज निर्यातमा रोक लगाएको हो । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । सरकारको यो निर्णय तत्काल लागू भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
सरकारले घरेलु माग पूरा गर्न र प्याजको मूल्य पूरा गर्न यस्तो कदम उठाएको हो । अहिले दिल्लीमा प्याज ३५ देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । गएको डिसेम्बेरमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
यो प्रतिबन्धले बैङ्लोर र कृष्णपुरममा उत्पादन हुने प्याजलाई पनि समेटेको छ । त्यहाँको प्याज आकार र स्वादका कारण भान्सामा प्रयोग गरिँदैन । ‘प्याजको सबै किसिमको निर्यात तत्काललाई रोक लगाइएको छ’, मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । तर, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, श्रीलंका लगायत देशमा निर्यात गरिने इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
कोभिडले समस्यामा परेको पर्यटन उठाउने बिषय सरकारको प्राथमिकताः मन्त्री श्रेष्ठ
असार २१, काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको उत्थान पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड क्यानडाको सहकार्यमा
नागरिकता विधेयक: पुरानो फिर्ता, नयाँ संशोधन विधेयक पेस गर्ने
सुनको भाउ बढ्यो, आज तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने
अस्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्यो, अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
साताको दोस्रो कारोबारको दिन सेयर बजारमा भारी गिरावट
आज सुनचाँदीको भाउ स्थिर
नेपालका लागि सम्पर्क
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
©2022 MNTVONLINE.COM | Technology Partner appharu.com